Hawk isha waa buluug buluug ah oo kala duwan oo ah quartz microcrystalline quartz - fiidyow
Iibso dukaan isha dabiiciga ah dukaankeena
Hawk isha waa buluug mugdi madow leh oo kala duwan oo ah kilkccalline quartz. Waa macdan u beddela macdanta kale waqti ka dib. Waxay markii hore ahayd yaxaas ka dib markii dambana "loosoosaaray" galay "quartz". Crocidolite waa macdanta buluugga ah ee buluuga ah ee ay kujirto qoyska ribeckite ee silikates silikates. Isbeddelka dhagaxa wuxuu bilaabmaa iyadoo quartz uu si tartiib tartiib ah isugu dhexjiro tuubooyinka loo yaqaan 'crocidolite'.
Quruxdaani waxaa caan ku ah wada sheekaysigeeda. Waxay umuuqataa indho hawiye. Waxay la xiriirtaa isha isha iyo pietersite, oo labaduba muujinaya sheeko isku mid ah. Tiger ka duso Xaqiiqdii waxaa loo sameeyay isbarbar dhiga oo leh maadooyin bir ah oo sareeya.
Iska yar, daaweyn iyo kala-sooc
Dhagxaannada indhaha Hawk waa caadi in la daaweeyo ama aan sinnaba loo kobcin.
Gems waxaa sida caadiga ah la siiyaa jarjar cabokon si ay ugu muujiyaan sheekada. Dhagaxyada casaanka waxaa lagu sameeyaa daaweyn kuleyl ah. Dhagax madow ah ayaa si fudud loo iftiimiyaa si loo hagaajiyo midabka iyadoo la adeegsanayo daaweynta nitric acid.
Muraayadaha dabiiciga ah ee fiber optic-ka waa muraayad caan ah isha tiger, waxaana lagu soo saaraa midabo badan oo kala duwan. Indha-indheeyaha Tiger wuxuu ugu horrayn ka yimaadaa Koonfur Afrika iyo Bariga Aasiya.
Mitirka microcrystalline waa iskudhacyada 'quartz kirismaska' oo lagu arki karo kaliya hoos u dhac weyn. Noocyada 'cryptocrystalline' waa mid translucent ama inta badan opaque, halka noocyada hufan ay u muuqdaan kuwo 'macrocrystalline'. Chalcedony waa qaab loo yaqaan 'cryptocrystalline qaab silica' oo ka kooban labajibbaarayo wanaagsan oo labada mitir ah, iyo monoclinic polymorph moganite. Noocyo kale oo dhagax dhagax leh oo ah miisas macmal ah agate, carnelian ama sard, onika, helloqof, Iyo yasbid.
Hawk isha macnaha
Sida quruxda badan, dhagaxan ayaa loo qaddariyo inuu yahay dhagaxa magriyeedka kaas oo dhisa shaashad ilaalin ah oo ku xeeran xudunta si ay uga ilaaliso halista nolosha. Waxaa loo aqoonsan yahay inuu nafta ka caajisiyo nafsadda, waxay keentaa aqoon iyo caddeyn xagga fikirka ah si loo arko xaqiiqda nolosha.
Hawk isha, kana timid Koonfur Afrika